सरोजले अमेरिकाबाटै भने- ‘मेरो कुरा काट्नेहरू काटिरहनु !’ « Nepali Digital Newspaper
सरोजले अमेरिकाबाटै भने- ‘मेरो कुरा काट्नेहरू काटिरहनु !’
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार १५:०४
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा योगदान, त्याग र जीवनको आधा उमेर बिताउने थोरै कलाकारहरू मध्येमा पर्छन् सरोज खनाल । उनले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा दिएको टेवा, उनको उठबस र उनले फटाएको भोटो कमै कलाकारहरूले फटाएका छन् । नेपाली रङ्गमञ्चदेखि टेलिचलचित्र र भिडियो चलचित्र हुँदै ठूलो पर्दाको चलचित्रसम्मको सरोजको फड्को र निरन्तरतालाई सहज रूपमा आँकलन गर्नु कलाकारिता क्षेत्रमाथिकै अपमान हो भन्दा फरक नपर्ला ।
तर, आज काम र योगदानले भन्दा पनि सस्तो चर्चा र आधुनिक प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेर केही समय हिट कहलिएका दुई–चार जना कलाकारहरू सरोजको दोहोलो काट्न हात धोएर लागेको पाइन्छ । कारण ? उनी अमेरिका गए रे…! उनीसँग अमेरिकी पासपोर्ट र पिआर रहेछ रे…।
यतिबेला विश्व नै कोरोनाको मारमा परेको छ । त्यसमाथि अमेरिका त झनै आक्रन्त छ यसबाट । उनको परिबार अमेरिकामा नै छन् । आफ्नो परिवारलाई भेट्न उनलाई अमेरिकी सरकारले यस्तो समयमा अमेरिका जान उपलब्ध गराएको अवसरको सदुपयोग गरे उनले । के बिगारे त सरोजले ? कि यता उनले कसैलाई धोका दिए या गुमराहमा राखे ? उनी भागेको होइनन्, परिवार भेट्न गएका हुन् । यस्तो बेलामा को त्यो मूर्ख अभिभावक होला जो परिवारसँग छुट्टिएर अलग बस्न सक्छ ?
सरोजले पनि परिवारको साथ चाहे र उनको परिवारले पनि उनको साथ खोज्यो । के यो कुरामा वितण्डा नै मच्चाउनु पर्दथ्यो त ? कुरा बुझ्न सकिएन । प्रवाशमा आफ्नो परिवार अप्ठेरोमा परेको समयमा रहंदा यता सरोज कसरी एक्लै मन बुझाएर बस्न सक्छ न त ? किन उनीमाथि आपत्तिजनक शङ्का, उपशङ्का, बाण र ब्यङ्ग्य हानिन्छ ? सरोज उडेको हवाइजहाजमा अरू पनि नेपाली थिए त ? उनिहरू चाहिँ राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त र स्वाभिमानी ? सरोज खनालचाहिँ खराव र फटाहा ? यस्तो ब्यक्तिगत लान्छना र गलत ब्यवहारले हामी कस्तो भाषा र संस्कारको विकास गरिरहेका छौँ ?
जुन बेला लामो प्रवासी जीवनबाट सरोज नेपाल फर्किए तबदेखि नै उनलाई विभिन्न भाषा र शैलीबाट लखेट्न र घोचपेच गर्न शुरू गरिएको थियो । उनको ब्यक्तिगत जीवनका कुरामा डढेलो लगाउन खोज्नेहरूलाई यो थाहा भएन कि त थाहा भएर पनि बुझ पचाए, नेपाली कलाकारिता क्षेत्रलाई सरोजले कति हराभरा बनाएका थिए भनेर ।
सरोजले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पुऱ्याएको योगदान र उनको उपस्थितिको कतै चर्चा छैन । उनले प्रवासमा दुःख गरेर कमाएको धन नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसबाट सयौँले पाएको राजगारीको गाइँगाइँसम्म हामी गर्दैनौँ, गर्छौं त पिआर र नागरिकताको मात्र । यही लगानी कुनै खैरो कपालवालाले गऱ्यो भने त्यसलाई पूजा गर्न हामी हानथाप गर्छौं तर, एउटा नेपालीको छोरोले गर्दा उसको प्रशंसा गर्नु सट्टा उसलाई हतोत्साहित बनाउँदै प्राविधिक पाटो केलाउंनतिर लाग्छौँ । ‘मलाई अचम्म लाग्छ । किन मप्रति यस्तो द्वेष र राग ? के परिवार अप्ठेरोमा पर्दा म भेट्न जान नहुने ? यसमा मेरो के गल्ती भयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन’– अमेरिकाबाटै सरोजले भने ।
नेपालमा आफ्नो बारेमा चलेको र चलाइएका हल्लाबारे सरोज यतिबेला खिन्न भएका छन् । केही कमाएको धन नेपालमै लगानी गर्छु भनेर त्यतिबेला सरोज नेपाल आएका थिए र उनले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि गरिरहेका छन् । अमेरिकाबाट आएपछि उनले नेपालमा ब्यापारसँगै कलाकारितामा पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
परिवार भेट्न र दुःख परेको समयमा परिवारका साथ समय बिताउने चाह कसलाई हुँदैन ? त्यसमाथि सरोज अभिभावक हुन् । त्यो अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु सरोजको कर्तब्य हो– ‘म मेरो परिवारलाई जीवनकै ठूलो सम्पत्ति, शान र मान ठान्छु । यस्तो अवस्थामा मलाई कुन नैतिकताले परिवारबाट टाढा रहन दिन्छ भन्नु त ? मेरो यसपटकको अमेरिका यात्रालाई विभिन्न शङ्का, आरोप र दोषबाट हेर्नेहरूलाई केही भन्दिनँ । सबैको जय होस् । म परिवारको साथ यस्तो अवस्थामा रहन पाएको छु । यो नै मेरो लागि ठूलो कुरा हो । जसले जे–जे भने पनि भनुन् । सबैको जय होस्’– सरोजले अनलाइनमा हामीसँग कुरा गर्दै भने ।
‘केही मान्छेहरुलाई त्यो जमिन फिर्ता आउला कि भन्ने डर छ’ (प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यको पूर्णपाठ)
घुन्साको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घुन्सा जस्तो दुर्गम गाउँ आगामी तीन वर्षमा नै
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको राप्ती नगरपालिका-६ हर्दीस्थित राजमार्गमा सोमबार साँझ ग्यास बुलेटको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ । भारतीय
विशेष प्रतिनिधि, कपिलवस्तु कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटलाई सामान्य सन्दर्भको रुपमा चित्रित
सोमबार नेपालमा थप १,९८० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २,२२,२८८ पुगेको
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा सामुहिक कोभिड-१९ परीक्षणको घोषणा
‘केही मान्छेहरुलाई त्यो जमिन फिर्ता आउला कि भन्ने डर छ’…